Ndị ọzọ iji QGIS mee ihe na gam akporo na iOS mobiles - Geofumadas
Ndị ọzọ iji jiri QGIS na ekwentị mkpanaaka na iOS
Jenụwarị, 2016 Apụta, Geospatial - GIS, qgis
QGIS etinyela onwe ya dị ka ngwa ọrụ oghere mepere emepe na-eto ngwa ngwa yana atụmatụ nkwado maka iji ha rụọ ọrụ. Obi dị anyị ụtọ ịmata na ụdị QGIS maka ngwaọrụ mkpanaka adịlarị.
Expdị ngwa ngwa eji arụ ọrụ na-eme ka ngwa desktọọpụ họrọ ịmepụta nsụgharị maka iji ekwentị ma ọ bụ mbadamba. Okwu nke ngwanrọ maka Geographic Information Systems bụ ihe doro anya n'ihi itinye aka na georeferencing na ojiji ubi maka ubi na desktọọpụ Geo-engineering with high interdependence. Ruo ugbu a, ụlọ ọrụ ndị na-akwalite ngwanrọ akụrụngwa nwere ngwa mkpanaka ha ogologo oge, gụnyere AutoCAD WS, BentleyMap maka mobile, ESRI ArcPad, SuperGeo mobile, inye ụfọdụ ihe atụ.
N'ihe banyere QGIS, ọ dịkarịa ala, ngwa abụọ edepụtara dị ka ihe ngwọta, n'aka OpenGIS.ch:
1. QGIS maka iOS.
Ọbụghị nrọ banyere ya. Ọ bụ ezie na QGIS bụ ikpo okwu n'elu desktọọpụ ya, ịnwe ụdị QGIS maka iPhone ma ọ bụ iPad agaghị enwe ike; enwere ike ma ọlị ọ bụrụhaala na Apple agbanweghị amụma azụmahịa ya.
Nsogbu bụ na ụdị ikikere nke QGIS na-eji bụ GPL, nke kachasị dị na ya bụ mmeghe nke koodu nke ndị ọrụ njedebe mara ma melite. Iwu nke egwuregwu nke AppStore na-ekwu na ọ gaghị ekwe omume ịzụlite ngwa ndị na-enweghị koodu ikike nke na-ekwe nkwa na a gaghị eji ya emerụ ọdịmma nke ndị ọzọ. Yabụ naanị ụzọ ga - abụ ịzụlite na mpụga nke AppStore, na - eche na ndị nwere mmasị ga - achọ Jailbreak ngwaọrụ ahụ, nke na - enweghị amamihe, ọ bụghịkwa mmasị nke ndị ọrụ iOS.
Obi ọmịiko, ịtụle ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ na ụlọ ọrụ ndị na-ahọrọ software Apple, mana ọ bụkwa ihe atụ nke nsogbu ndị anyị ga-ahụ na ọdịnihu, nke ngwanrọ nke ụlọ ọrụ na-achọ imechi ohere maka software n'efu.
2. QGIS maka gam akporo
Nke a bụ ngwa nke na-emetụta nsụgharị desktọọpụ nke QGIS na mbipute 2.8 Wien. Ngwa ahụ dị ihe dịka 22 MB, ọ bụ budata na Google Play.
Ozugbo nrụnye ahụ amalitela, ọ na-arịọ ka arụnyere Minista II, nke na-arụ ọrụ dị ka akwa mmiri n'etiti ngwa QGIS na ụlọ akwụkwọ ọbá akwụkwọ QT. Mgbe echichi nke Ministro II, na-agba ọsọ na nbudata nke QT5 ọba akwụkwọ, dị ka Qt5Core, qtnystlm, qtsensor, qtGui, libqoffscreen, libminimal, qlibqeglfs na ndị ọzọ njikwa na-eji ikike nke geopositioning, compass, keyboard, dijitalụ akara na arụmọrụ ndị ọzọ gam akporo.
N'ozuzu ngwa fọrọ nke nta ka a oyiri nke QGIS desktọọpụ na oyiyi na akụkụ dị iche onodu menu na-emi odude dị ka mobile atụmatụ ihe icon ke mkpụrụedemede nri akuku na N'ezie akara òké (mpịakọta , nhọrọ, mbugharị) bụ ihe dị mma.
Na nkenke, atụla anya iji ngwa a na ekwentị. N'agbanyeghị ole ihuenyo ahụ dị, ọ naghị arụ ọrụ n'ihi na enweghị ike ịchịkwa mpịakọta mpịakọta maka nhọrọ data; o doro anya na ngwa ahụ anaghị ekwe ka ntụgharị. Dịka ị pụrụ ịhụ, ejiriwo m weta ọrụ, na-akpọ data WFS ma jiri ya na SONY Xperia T3 ekwentị mkpanaaka; Ezie na enwere ike ilele data ahụ, njikwa njikwa akụkụ agaghị ekwe omume.
Iji ya na a mgbe nile size mbadamba bụ maa bara uru dị ka ọ bụ dị ka desktọọpụ ngwa. Have ga-agbasi mbọ ike ịghọta ebe ebe echekwara data na kaadi microSD ma ọ bụ na ebe nchekwa dị n'ime.
Download QGIS maka gam akporo
3. QField maka QGIS
Ejikwa otu ụlọ ọrụ ahụ mepụta ngwa a, na-ele ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 36 MB.
Na mbido, ọ na-achọ maka ịdị adị nke ọrụ QGIS, nke na-aghọ ihe dị mgbagwoju anya ebe ọ bụ na itinye faịlụ na mbadamba nkume ga-apụta na ụzọ nke data mpaghara bụ ndị ikwu.
QField nwere ihe eji eme ihe eji eme ihe eji eme ihe maka igwe na aka. Ngakọrịta mmekọrịta na-enye ohere ịmegharị data na-aga n'ihu n'etiti ngwaọrụ mkpanaka na akụrụngwa dị. Ọ dị ezigbo mma dịka mgbakwunye na ụlọ ọrụ QGIS, n'adịghị ka nke gara aga nke bụ nomi nke desktọọpụ desktọọpụ.
Dịka ị pụrụ ịhụ, ojiji nke ngwa a, ịbụ onye amaala, na-agbanwe, ọ bụ ezie na ị na-eji obere ekwentị. Ọ na-adị ka ịnwale ya, n'ihi na itinye faịlụ na ụzọ nwere njikọ bụ ihe m na-atụghị anya ya.
Download QField maka QGIS
android Emmanuel QGIS
Previous Post«Previous QGIS 3.0 - Kedu, mgbe na ihe; ọ pụtara
4 Na-aza "Ndị ọzọ iji jiri QGIS mee ihe na gam akporo na iOS mobiles"
Sab kwuru, sị:
September, 2019 na
Ngwa ndenye nke dabere na QGIS dị na iOS (TestFlight n'oge a):
Mariano kwuru, sị:
Good mgbede ọ bụla, m chọrọ ịjụ ma ọ bụrụ na onye ọ bụla maara otú mmasị a foto na ihe mmewere nke ụdị ihe, na m oru ngo m kere ubi ma na-etinye mpụga akụ na ọ bụ ihe na ukara website nke qfield kwuru, ma otu ugboro na ngwa mgbe ị na-ewere foto, a na-echekwa ya. Ndi owo ọfiọk ntak-a? Agbalịrị m ụzọ na-agbanwe agbanwe na ihe ọ bụla. :(
A na-ekele mmadụ nile na ihe ọ bụla
Jenụwarị, 2016 na
Ee, emeela m. Ọ na - eme bụ na ọrụ m chọrọ iji rụọ ụzọ arụ ọrụ.
Na-agba kwuru, sị:
Ụzọ ndị dị na ọrụ QGIS site na ndabara bụ ndị ikwu. Enweghị ihe ọ bụla. Nanị deepụta nchekwa gị na mbadamba ma ọ bụ ekwentị gị.